Maareynta Dhammaan Maalgashadayaasha si Fudud leh Mulkiilaha CRM
Features » Milkiilaha CRM
La soco kaliya faahfaahinta milkiilayaasha hadda laakiin sidoo kale faahfaahinta kuwa mustaqbalka.
Waan fahamsanahay caqabadahaaga ...
Maaddaama aad tahay maamule kireyn baaxad leh ama hawl wade ka shaqeeya daraasiin guryo adeeg ah iyo guryo kala geddisan, waxaad la macaamili kartaa milkiileyaal tiro yar oo wanaagsan. Furhtermore, haddii aad socotid waqti-wadaag, maalgashadayaashaada waxaa laga yaabaa inay ku xisaabtamaan boqollaal ama kumanaan.
La socoshada magacyada iyo faahfaahinta xiriirka milkiile kasta iyo hubinta in shaqaaluhu ogaadaan guryaha ay iyagu leeyihiin waxay noqon karaan kuwo caqabad ku ah meheraddaada martigelinta. Intaa waxaa sii dheer, maareynta dhuumaha mulkiilayaasha suurtagalka ah badanaa waxay ka dhigan tahay inaad isticmaasho laba nidaam sida Hubspot ama waraaqaha si fudud si aad ula socoto faahfaahinta qof walba.
Sidee Zeevou Mulkiilaha CRM u caawin karaa?
Zeevou'Mulkilaha-ku-dhisan CRM wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si fudud u maamusho dhammaan maal-gashadayaasha aad la shaqeysid. Waad kala socon kartaa faahfaahintooda shaqsiyeed, waxaadna siin kartaa meel laga soo galo Xariirka Mulkiilaha oo la soco shuruudaha maaliyadeed ee qandaraaska aad la gashay dhammaantood hal marin soo gal.
Waxaa intaa dheer, muuqaalka milkiilaha uma baahna inuu xiriir la yeesho a unit. Tani waxay ka dhigan tahay inaad u adeegsan karto Milkiilaha CRM inaad sidoo kale u maamusho cilaaqaadka aad la leedahay hagaha horseedka ah ee aadan hadda la shaqeynayn, adigoon u baahnayn inaad adeegsato dalab saddexaad.
← Muuqaal Hore
Muuqaalka Xiga →